I-pneumonitis kukudumba kwemiphunga yakho. Ukudumba kunokwenza kube nzima ukuphefumla kwaye kuthintele ekufumaneni ioksijini eyaneleyo. Nantoni na ecaphukisa izicubu zakho zemiphunga inokukhokelela kwi-pneumonitis. Okukhona uya uvezwa ixesha elide, kokukhona uya kukhula umphunga. I-Pneumonitis inokuhlala ixesha elifutshane okanye inganyangeki.
Yintoni ebangela okanye inyusa umngcipheko wepneumonitis?
Umngundo, intsholongwane, okanye intsholongwane
Iikhemikhali ezinje ngamayeza okubulala izitshabalalisi, iikhemikhali zamachibi, okanye izinto zokucoca indlu
Amayeza athile, anje ngamayeza okubulala iintsholongwane, amayeza omhlaza, kunye namanye amayeza entliziyo
Umsi ovela emlilweni, okanye uthuli oluvela ezinkozo, njengasefama
Ukutya okanye ulwelo olungena ngaphakathi
Ukuboniswa kwiintsiba zeentaka okanye ilindle
Zithini iimpawu zempawu zepneumonitis?
Isikhohlela okanye ingxaki yokuphefumla
Ukuvutha okanye ukuntywila njengoko uphefumla ngaphakathi
Impumlo egudileyo, amehlo anamanzi, okanye umqala obuhlungu
Ubuhlungu, ukuqina, okanye ukutshisa emqaleni okanye esifubeni
Ngequbuliso intloko ebuhlungu, isiyezi, ingxaki yokucinga ngokucacileyo, okanye ukuziva utyhafile
Imilebe eblue okanye iinzipho
Umkhuhlane, Ukugodola, kunye neentlungu zezihlunu
Umkhuhlane okanye usulelo lwemiphunga olwenzeka rhoqo
Ichongwa njani inyumoniya?
Umboneleli wakho wezempilo uya kubuza malunga neempawu zakho nokuba zaqala nini. Uya kukubuza ukuba uyazi ukuba ubonakalisiwe ngantoni. Unokufuna naluphi na olu vavanyo lulandelayo:
Uvavanyo lwegazi zisetyenziselwa ukujonga ubungakanani beoksijini kunye necarbon dioxide egazini lakho. Iziphumo zinokuxelela ababoneleli ngezempilo ukuba imiphunga yakho isebenza kakuhle kangakanani. Iimvavanyo zegazi zingasetyenziselwa ukujonga iimpawu zempendulo. Umzimba wakho unokudala ukuvuvukala njengempendulo kwinto onayo.
X-ray okanye CT scan inokusetyenziselwa ukukhangela usulelo okanye ulwelo kwimiphunga yakho. Imifanekiso inokubonisa i-fibrosis (isikhumba samaphaphu akho emiphunga).
Uvavanyo lomsebenzi wePulmonary (PFTs) iya kubonisa ukuba i-oxygen eninzi kangakanani na efunyanwa ngumzimba wakho. Uphefumlela kwisithethi somlomo esidityaniswe kumatshini. Umatshini ulinganisa ukuba ungakanani umoya ophefumla ngaphakathi nangaphandle ngaphezulu kwexesha elithile.
Ibronchoscopy yinkqubo yokujonga ngaphakathi kwendlela yakho yomoya. I-bronchoscope (ityhubhu encinci kunye nokukhanya) ifakwe emlonyeni wakho kwaye ihambise umqala wakho kwindlela yakho yomoya.
Isampuli yamathambo emiphunga ingathunyelwa elebhu kuvavanyo. Isampulu inokuthathwa ngexesha le-bronchoscopy, ngoqhaqho, okanye iqabaka kwaye isuswe ngenkqubo ebizwa ngokuba yi-cryobiopsy.
Inyangwa njani i-pneumonitis?
Iimpawu zakho zinokuhamba ngaphandle konyango. Ukuba iimpawu zakho zinzima okanye azihambi, unokufuna oku kulandelayo:
Amayeza nciphisa ukukhohlela nokudumba, vula umoya, kwaye wenze kubelula kuwe ukuphefumla. Unokufuna amayeza ukunyanga usulelo lwebacteria.
Ioksijini inokunikwa ukuba inqanaba leoksijini egazini lakho lisezantsi kakhulu.
Ndingenza ntoni ukulawula pneumonitis?
Phumla njengoko kuyalelwe. Gcina intloko yebhedi yakho iphakanyisiwe ukukunceda uphefumle lula. Unako kwakhona ukuphakamisa intloko yakho namagxa phezulu emqamelweni okanye uphumle kwisitulo esihleli phantsi.
Yenza ukuphefumla okunzulu kunye nokukhohlela. Ukuphefumla okunzulu kunceda ukuvula indlela yakho yomoya kunye nokucoca i-mucus okanye ukuxinana. Thatha umoya omninzi kwaye ubambe ixesha elide kangangoko unakho. Vumela umoya uphume emva koko ukhohlele ngamandla. Unokunikwa i-spirometer yokukhuthaza ukukunceda uphefumle nzulu. Faka iqhekeza leplastiki emlonyeni wakho. Thatha kancinci, uphefumle nzulu. Emva koko vumela umoya uphume kwaye ukhohlele. Phinda la manyathelo njengoko eyalelwe ngumboneleli wakho wezempilo.
Musa ukutshaya. Kuphephe ukutshaya. I-Nicotine kunye nezinye iikhemikhali ezikwi-cigarettes nakwi-cigar zingenza kube nzima ukuba ukudumba kwemiphunga yakho kube ngcono. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba ufuna ukutshaya ngoku kwaye ufuna uncedo ukuze uyeke. I-E-cigarettes okanye icuba elingenamsi lisenayo inicotine. Thetha nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokuba usebenzise ezi mveliso.
Fumana isitofu sokugonya somkhuhlane. Umkhuhlane unokuba buhlungu kuye nawuphina umntu onemiphunga. Fumana iyeza lokugonya ngokukhawuleza xa kucetyiswa unyaka nonyaka, ngesiqhelo ngoSeptemba okanye ngo-Okthobha. Unokufuna kwakhona isitofu sokugonya se-pneumococcal ukukhusela inyumoniya.
Musa ukusela utywala xa ugula. Utywala buthoba umnqweno wakho wokukhohlela kunye nokuthimla. Utywala bukwabangela ukuba umzimba wakho ulahlekelwe lulwelo. Oku kunokwenza i-mucus kwimiphunga yakho ibe nzima kwaye kube nzima ukukhohlela.
Sela ezinye izinto ezingamanzi. Ulwelo lunceda ukugcina iivesi zakho zomoya zimanzi kwaye zikwazi ngcono ukususa iintsholongwane kunye nezinye izinto ezicaphukisayo. Buza umboneleli wakho wezononophelo lwempahla ukuba ungakanani amanzi okusela ngosuku kwaye zeziphi iziselo ezingcono kuwe.
Sebenzisa i-humidifier epholileyo. Isichumisi siza kunceda ukwandisa ukufuma komoya ekhayeni lakho. Oku kunokwenza kube lula kuwe ukuba uphefumle kwaye uncede ukunciphisa ukukhohlela kwakho.
Yiya kulungiso lwemiphunga (ekubuyiseleni kwimo yesiqhelo) njengoko kuyalelwe. Umboneleli wakho wezempilo unokucebisa ukubuyisela kwimeko yesiqhelo ukuba uhlakulela inyumoniya enganyangekiyo. Ingcali yezonyango inokukufundisa imithambo yokuphefumla ukukunceda ugcine indlela yakho yomoya ivulekile.
Ndingenza ntoni ukuthintela inyumoniya?
Kuphephe nantoni na ecaphukisa imiphunga yakho. Imizekelo ibandakanya umsi, uthuli kunye nomsi. Kuya kufuneka unxibe imaski ukuba usebenza ngento ecaphukisa imiphunga yakho.
Lumkela abacoci bendlu. Musa ukudibanisa iimveliso eziqukethe iblitshi kunye neklorine. Sukusebenzisa ezi khemikhali kwindawo ezivaliweyo. Vula ifestile okanye umnyango ukugcina umoya uhamba.
Uyaphela okanye ungacingi kakuhle.
Imilebe yakho okanye iinzipho zijika zibe luhlaza okwesibhakabhaka okanye zingwevu.
Umlomo wakho, ulwimi, okanye umqala udumbile kwaye unengxaki yokuphefumla okanye yokuginya.
Unomkhuhlane ohlala ngaphezu kweentsuku ezi-3, kwanonyango.
Intlungu yesifuba okanye iingxaki zokuphefumla azipheli okanye ziba mandundu.
Isikhohlela sakho asibangcono kunyango.
Uyagabha okanye urhudo.
Yabelana njani nge-Excel 2019 ngeLizwi 2019
I-GAS-X ES (i-Gas-X eyongezelelweyo yamandla (i-Chewables) i-Peppermint Creme simethicone 125 mg)
Iingxaki zokuziqhelanisa ne-Chemistry ezili-1,001 kwiiDummies zokukopela iphepha
Utshintsha njani iphepha lakho lasekhaya kwi-Intanethi Explorer
I-N12 (iSuboxone Sublingual Film 12 mg / 3 mg)
Ukuqhekeka kweminwe kuBantwana
Ukuzivocavoca kweShin Splint
Uyisebenzisa njani i-App ekude yekhamera kwi-Apple Watch yakho
IAlka-Seltzer kunye neCold Formula ebandayo kunye neCough
Ungabuza njani iitafile zedatha yokufikelela kwi-Excel 2019
Ndingayithatha ibuprofen nge-adderall
iyeza leswekile yohlobo 2
lotrimin yenzelwe ntoni
iziphumo zecras estrogen
loluphi ucwangciso lweziyobisi yintsangu